Ku noolaanshaha Heerka 2 | Living at Level 2 | Unite against COVID-19
Ku noolaanshaha Heerka 2 | Living at Level 2
Haddii aad qabto hergabka ama calaamadah ama COVID-19, fadlan jog guriga oo si lacag la’aan ah ku wac Khadka Cafiimaadka (Healthline) 0800 358 5453 ama dakhtarkaaga wixii talo ah oo ku saabsan barista. xusuusnow, baarista waa lacag la’aan.
Haddii aad xaalad gurmad ah hayso, soo wac 111 isla markaaba.
Heerka Digniinta 2 waa inaad:
Ka fogow baaxad 2-miitir ah dadka kale ee ka baxsan guriga, ama 1-miitir goobaha shaqada.
Ku xiro waji daboolashada haddii:
aad jirtid 12 sanno iyo ka weyntahay xarumaha dadweynaha gudaha sida maktabadaha, matxafyada iyo dukaamada waaweyn.
aad ka tahay macmiil-ku wajahan xubinta shaqaalaha soo goobaha dhaweynta ama xarumaha dadweynaha.
ka fogaanshaha jireed ayaa adag (tani ma ahan sharuud laakin si sareyso ayaa loogu talliyay).
Raadraac meesha aad aadid iyo cida aad la kulantid. Isticmaal app-ka Raadraacaha NZ COVID, buug-yaraha raadraacaha NZ COVID, ama qoraalada qoran.
Guriga joog haddii aad xanuunsantahay. Ha aadin shaqada ama dugsiga. Ha dhexgelin bulshada.
Soo wac Healthline si aad u diyaarisid baaritaanka haddii aad muujisid wax aastaamaha COVID-19. Haddii aad heshid baaritaanka COVID-19, guriga u joog is gooniyeynta illaa aad ka heshid natiijooyinkaaga.
Is-karantiil islamarkiiba haddii laguu sheego inaad sidaas sameysid.
Dhaq oo u qalaji gacmahaaga si caadi ah.
Wax badan ka ogow:
Goobaha La danaynayo
Raadraaca u dhawaanshaha
Fayraska iyo aastaamaha COVID-19
Usu imaanshaha, dhacdooyinka iyo xarumaha xafladda ayaa yeelan karo ugu badnaan:
100 qof oo boos walboo gudaha ee la qeexay, iyo
100 qof oo boos walboo bananaka ee la qeexay.
Xayiraaddahan waxay quseysaa dhammaan dhacdooyinka, oo ay ku jiraan nikaaxyada, duugaha iyo munaasabadaha Māori, adeegyada diimeedka, ciyaaraha bulshada iyo howlaha madadaalada, dhacdooyinka qoyska iyo shaqooyinka gaarka ah.
Boos la qeexay ayaa ah albaab kaliya ama boos banaanka ah oo loo gooniyeeyay boosaska kale.
Haddii meel ay leedahay wax ka badan 1 boos la qeexay, markaas dadka ma dhexgeli karaan inta u dhaxeyso boosaska. Tani waxaa ku jiro markii aad galeysid, ka tageysid, ama aadeysid musqusha.
Shaqaalaha siinayo adeegyo xafladda laguma darin xadeynada usu imaanshaha gudaha iyo banaanka.
Haddii aad leedahay dad ku jiro labadaba boosaska gudaha iyo banaanka, waxaad u baahantahay inaad hubisid labada koox inaysan isku darsamin waqti walba. Tan waxaa loola jeedaa hubinta inaad leedahay albaabo gooni ah oo aagaga la wadaago — tusaale ahaan musqulaha ama miisaska meesha dadka u aadan inay ka dalbadaan ama lacag ku bixiyaan.
Wax badan ka ogow usu imaanshaha Heerka Digniinta 2
Safarka iyo sosocodka
Haddii aad jiran tahay, guriga joog. Haddii aad fiiicantahay, waxaad ku safri kartaa Heerka Digniinta 2, oo ay ku jiraan gobolka ah Heerka Digniinta 2. Hubi inaad ku sameysid qaab badqab ah.
Safarka shaqsiga oo dhinaca xaduuda Heerka Digniinta si toos ah ayay u xadidantahay. Tani waxay caawineysaa joojinta faafida fayraska. Waxaad ku safri kartaa kaliya dhinca xaduuda Heerka Digniinta haddii safarkaas la ogolaado.
Ganacsiyada qaar waa la ogolyahay. Qaar ka mid ah safarka shaqsiyeed waa la ogolyahay, tusaale ahaan daryeelka caafimaadka, gurmadyada, oo siinayo daryeel ama taageero qof ku jiro xaalad adag ama dhimashada ama daryeelka carruurta la wadaago.
Haddii aad ugu safreysid dhinaca xaduuda sababo la ogolyahay, hubi inaad haysatid cadeyn la aqbali karo.
Haddii sababtaada aad ugu safartid dhinaca xaduuda aan la ogoleyn, waad codsan kartaa ka dhaafida. Codsigaaga wuxuu u baahanayaa inuu buuxiyo sharuuda quseyso.
Wax badan ka ogow safarka, sosocodka iyo ka dhaafida
Jimicsiga iyo raaxaysiga.
Heerka Digniinta 2, waad sameyn kartaa ciyaarahaaha caadiga ah iyo howlaha madadaalada haddii aad si badqab ah u sameyn kartid. Laakin haddii aad jirantahay, guriga joog.
Waad sameyn kartaa howlaha sida:
lugeynta, baskiil wadida iyo ugaarsiga dhulka dhowrista dadweynaha
ku dabaalashada barkada dabaasha dadweynaha, laakin waxaa jirayo xadeyno
aadista jiimka, laakin waxaa jirayo xadeyno
doon kaxeynta iyo ciyaaraha biyaha moorooyinka.
Ciyaaraha iyo madadaalada waa inay sidoo kale buuxiyaan tilmaamaha usu imaanshaha iyo diiwaan haynta.
Jimicsiyada iyo ciyaaraha ayaa ku adag in lagu sameeyo waji daboolashada, marka sharuuda waji daboolashada ma quseyso jimicsiga.
Goobaha jiimka, dadka waxay u baahanyihiin inay joogteeyaan 2-miitir oo ka fogaanshaha dadka kale, taas oo micnaheeda ah boosaska jiimka gudaha waa inay xadeeyaan tirada dadka ka qeybgeli karo.
Markii lagu tababaranayo dadweynaha, ka fogow 2-miitir ka fogaansho ah dadka aadan garaneynin meesha suurtogalka ah.
Maaskarooyinka iyo waji daboolashada
Waji daboolashada ayaa looga baahanyahay dhoor meelood, oo ay ku jiraan gaadiidka dadweynaha, booqashada xarumaha daryeelka caafimaadka, dukaamada weyn, iyo goobaha kale ee dadweynaha.
Waxaan sidoo kale kuugu dhiirogelineynaa inaad xiratid waji daboolashada oo aad joogteysid kala fogaanshaha 2 miitir dadka kale markii aad ka tageysid gurigaaga. Gaar ahaan haddii ay adag tahay in la ilaaliyo fogaanta loo jirsanayo kuwa kale. Tusaale ahaan, marka aad soo qaadanayso cuntadda safaariga ah ee la qaato.
Ogow marka aad u baahantahay inaad xiratid waji daboolashada
Ku taageer cuntada iyo noolaanshaha
Haddii ay dhibaato kaa haysato lacagta, cuntadda, fayo qabkaaga maskaxda ama jidha waxa uu kuu noqon karaa taageero.
Riix halkan macluumaadka ku saabsan taageerada shakhsiyaadka
Riix halkan macluumaadka ku saabsan taageerada ganacsiyada
Xarumaha Waxbarashada Hore, dugsiyada barbaarinta, dugsiyada iyo xarumaha waxbarashada heerka sare waxay u furanyihiin dhammaan kooxyada da’ walba.
Badqab ayay u tahay carruurta inay ku jiraato dugsiga.
Carruurta ama dhalinta waa inay guriga joogaan haddii:
qabaan aastamahan COVID-19
ay sugayaan natiijooyinka baaritaanka COVID-19.
Si sareyso ayaa loogu talinayaa in dadka da’da 12 iyo ka weyn ay ku xirtaan waji daboolashada dugsiga.
Goobaha shaqada iyo ganacsiyada
Dhismooyinka ganacsiga ee buuxiyaa sharuudaha caafimaadka dadweynaha waxay u furi karaan shaqaalaha iyo macaamiisha.
Sharuudaha caafimaadka dadweynaha waxaa ku jiro:
soo bandhigida warqadda koodhka QR ee app-ka Raadraaca NZ COVID iyo lahaanshaha nidaamyada raadraaca xiriirka oo kale; iyo
joogteynta tallaabooyinka nadaafada sida gacmo dhaqashada iyo nadiifinta joogtada ah ee sagaxadaha, iyo
raacida tilmaamaha ka fogaanshaha jireed.
Adeegyada lagu bixiyay dhismooyinka macaamiisha (tusaale ahaan gurigooda) iyo adeegyada xiriirka dhow (tusaale ahaan qurxiyayaasha iyo timo qurxiyayaasha) ee buuxiyaa tallaabooyinka caafimaadka dadweynaha way shaqeyn karaan. Qof walba ee ka shaqeynayo adeega xiriirka u dhawaanshaha waa inuu xirtaa waji daboolashada.
Haddii goobta shaqada aysan buuxin karin tallaabooyinkaan ma shaqeyn karaan.
Dhammaan ganacsiyada ayaa lagu dhiirogelinayaa inay isticmaalaan qaabab kale ee shaqeynta haddii ay suurtogal tahay iyo la hadlida shaqaalaha si loo aqoonsado halisaha iyo qaababka lagu maareeyo.
Ganacsiyada waa inay sidoo kale buuxiyaan waajibaadyada kale ee caafimaadka iyo badqabka, ku hayaan shaqaalaha badqab iyo fayo qab oo buuxiyaan heerarka shaqada ugu yar.
Diiwaan haynta qasabka ah ee loogu tallogalay ganacsiyada iyo adeegyada
Ganacsiyada qaarkood iyo diyaariyayaasha xafladda waa inay si sharci ahaan ah uga baaraan dagaan meesha aad ku qoreysid booqashadaada. Waa inaad yeelataa wax ka badan hal qaab oo dadka ay ku qoraan booqashadooda, gaar ahaan dadka aanan u suurtogaleynin inay sawiraan koodhadhka QR.
Tani waxaa ku jiro biibitooyinka kafeega, maqaayadaha, baararka, kasiinooyinka, xafladaha, daryeelka waayeelka, xarumaha daryeelka caafimaadka (marka laga reebo bukaanada), timo jarayaasha, xarumaha jimicsiga, kalaabyada habeenkii, maktabadaha, maxkamadaha, wakaaladaha dowliga hoose iyo dhex, iyo bixiyayaasha adeegyada bulshada iyo xisaabiyaasha adeega macmiilka.
Qaababka ay kuugu suurtogaleyso inaad ku diiwaanisid booqashadaada waxaa ku jiro:
weydiinta dadka inay sawiraan iyaga oo isticmaalayo app-ka Raadraacaha NZ COVID
u qorista faafhfaahinada macaamiishaada iyo booqdayaashaada gacan ahaan
bixinta foomamka warqada ee loogu talagalay macaamiisha iyo martida si loogu buuxiyo faahfaahinadooda iyo meel leh sanduuqa aruurinta
adiga oo isticmaalayo nidaamyada diiwaan hayntaada jirtay, sida helitaanka marinta kaarka ama diyaarinada balanta.
Ganacsiyada ayaa weli u baahan inay sii wadaan inay muujiyaan boostiga koodhka QR xittaa haddii aan looga baahneyn inay aruuriyaan diiwaanada macmiilka.
Xiriirka diiwaanada ayaa ah warbixinta shaqsiyeed. Waxay u baahanyihiin in la aruuriyo, la isticmaalo, la keydiyo, la fasaxay, iyo loo qubay si badqab ah oo illaalsan sida waafaqsan Xeerka Arimaha gaarka ah 2020.
Nidaamyada diiwaaninta kale waxay u baahantahay taxadar badan oo ku haynayo badsqab iyo illaalo.
Ka riix halkaan wixii warbixin ee ku saabsan diiwaan haynta iyo raadraaca u dhawaanshaha ee loogu tallogalay ganacsiyada
Adeegyada gurmadka oo dhammaan Heerarka Digniinta
Adeegyada gurmadka waxay ka shaqeynayaan dhammaan Heerarka Digniinta.
Haddii ay jiraan xaaladaha degdega, raac tilmaamaha gurmadka caadiga ah ama tallada maamulada gurmadka. Badqabkaaga ayaa soo hormarto.
Markii aad badqab tahay, taxadar qaad aad uga hortagtid faafida COVID-19, sida ka fogaanshaha jireed ama xirashada waji daboolashada.
Haddii ay jirto halis noloshaada ama hantidaada ku aadan, marwalba garaac 111 oo weydii Booliska, Dabka ama Ambalaansaha.
Ogow waxa lagu sameeyo xaalada degdega
Macluumaad kugu saabsan COVID-19 | Information about COVID-19
Ilaalinta bulshadaada | Protecting your community
Qaabdhismeedka Illaalinta COVID | The COVID-19 Protection Framework
Ku noolaanshaha Heerka 3 | Living at Level 3
Ku noolaanshaha Heerka 4 | Living at Level 4
Caafimaadka iyo taageerada dhaqaale | Available support